ယူကေစာမေးပွဲသတင်းများ (September 2011) - Myanmar Network
ယူကေစာမေးပွဲသတင်းများ (September 2011)
Posted by Ummay Ayman on September 7, 2011 at 11:48 in UK Exams ( စာမေးပွဲများအကြောင်း )
- ၂ဝ၁၁ ဇူလိုင်လအတွင်း၌ လျှောက်ထားသော LCCI Combined Group Diploma များကို ဗြိတိသျှကောင်စီ ပထမထပ်ရှိ Exam Services တွင်တနင်္လာနေ့မှ သောကြာနေ့အတွင်း မနက် (၈း၃ဝ) မှ (၁၂း၃ဝ) နှင့် နေ့ခင်း (၁း၃ဝ) မှ (၄း၃ဝ) အတွင်း ကိုယ်တိုင်လာရောက်ထုတ်ယူနိုင်ပါပြီ ကျောင်းမှတစ်ဆင့် လျှောက်ထားသော ကျောင်းသူ၊ကျောင်းသားများ သက်ဆိုင်ရာကျောင်းများသို့ စုံစမ်းမေးမြန်းနိုင်ပါသည်။ (new)
- ၂ဝ၁၁ ဩဂုတ်လ (၃) ရက်နေ့တွင် ဖြေဆိုထားသော LCCI June Series (On-demand) [Subject - ASE 3902 ( L3 Accounting: IAS)] အောင်စာရင်းနှင့် အောင်လက်မှတ်များကို တနင်္လာနေ့ မှ သောကြာနေ့ မနက် (၈းဝဝ) မှ (၁၂း၃ဝ) နှင့် နေ့ခင်း (၁း၃ဝ) မှ (၄း၃ဝ) အတွင်း ဗြိတိသျှကောင်စီ ပထမထပ်ရှိ စာမေးပွဲများဋ္ဌာနတွင် မှတ်ပုံတင် ၊ ငွေသွင်းထားသော ဖြတ်ပိုင်းနှင့်အတူ လာရောက်ထုတ်ယူနိုင်ပြီ ကျောင်းမှတစ်ဆင့် ဖြေဆိုထားသော ကျောင်းသူ၊ကျောင်းသားများ သက်ဆိုင်ရာကျောင်းများသို့ စုံစမ်းမေးမြန်းနိုင်ပါသည်။
- ၂ဝ၁၁ နိုဝင်ဘာလတွင် MRCP (Part 2) စာမေးပွဲကို ကျင်းပပေးမည်ဖြစ်သောကြောင့် ဖြေဆိုမည့် ကျောင်းသူ၊ကျောင်းသားများ စာမေးပွဲကြေးများကို စက်တင်ဘာလ (၁၉) ရက်နေ့ မှ (၂၇) ရက်နေ့ အတွင်း ဗြိတိသျှကောင်စီ ပထမထပ်ရှိ စာမေးပွဲများဌာနတွင် မနက် (၈း၃ဝ) မှ (၁၂းဝဝ) နှင့် နေ့ခင်း (၁း၃ဝ) မှ (၃း၃ဝ) အတွင်း လာရောက်ပေးသွင်းနိုင်ပါသည်။
- ၂ဝ၁၁ ဩဂုတ်လတွင် ဖြေဆိုထားသော YLE (Starters, Movers and Flyers) စာမေးပွဲ အောင်လက်မှတ် (Certificates) များကို ဗြိတိသျှကောင်စီ ပထမထပ်ရှိ စာမေးပွဲများဌာနတွင် တနင်္လာနေ့ မှ သောကြာနေ့ မနက် (၈း၃ဝ) မှ (၁၂း၃ဝ) နှင့် နေ့ခင်း (၁း၃ဝ) မှ (၄း၃ဝ) အတွင်း စာမေးပွဲအချိန်စာရင်း၊ မှတ်ပုံတင်ကဒ်ပြားနှင့်တကွ လာရောက် ကြည့်ရှု နိုင်ပါသည်။
- ၂ဝ၁၁ ဇူလိုင်လတွင် ဖြေဆိုထားသော MYOB Private Session စာမေးပွဲ အောင်လက်မှတ် (Certificates) များကို ဗြိတိသျှကောင်စီ ပထမထပ်ရှိ စာမေးပွဲများဌာနတွင် တနင်္လာနေ့ မှ သောကြာနေ့ မနက် (၈း၃ဝ) မှ (၁၂း၃ဝ) နှင့် နေ့ခင်း (၁း၃ဝ) မှ (၄း၃ဝ) အတွင်း မှတ်ပုံတင်ကဒ်ပြားနှင့်တကွ လာရောက် ကြည့်ရှု နိုင်ပါသည်။
- ၂ဝ၁၁ ဇွန်လတွင် ဖြေဆိုထားသော FCE စာမေးပွဲ အောင်လက်မှတ်များကို ဗြိတိသျှကောင်စီ ပထမထပ်ရှိ စာမေးပွဲများဌာနတွင် တနင်္လာနေ့ မှ သောကြာနေ့ မနက် (၈း၃ဝ) မှ (၁၂း၃ဝ) နှင့် နေ့ခင်း (၁း၃ဝ) မှ (၄း၃ဝ) အတွင်း စာမေးပွဲ အချိန်စာရင်း (သို့မဟုတ်) မှတ်ပုံတင်ကဒ်ပြားနှင့်တကွ လာရောက် ကြည့်ရှု နိုင်ပါသည်။
- LCCI Series (3/2011) ဇွန်လတွင် ဖြေဆိုထားသည့် ကျောင်းသူ၊ကျောင်းသားများ စာမေးပွဲ အောင်လက်မှတ် (Exam Certificates/Diplomas) များကို တနင်္လာနေ့ မှ သောကြာနေ့ မနက် (၈းဝဝ) မှ (၁၂း၃ဝ) နှင့် နေ့ခင်း (၁း၃ဝ) မှ (၄း၃ဝ) အတွင်း ဗြိတိသျှကောင်စီ ပထမထပ်ရှိ စာမေးပွဲများဋ္ဌာနတွင် မှတ်ပုံတင် ၊ ငွေသွင်းထားသော ဖြတ်ပိုင်းနှင့်အတူ လာရောက်ထုတ်ယူနိုင်ပ်ါပြီ ကျောင်းမှတစ်ဆင့် ဖြေဆိုထားသော ကျောင်းသူ၊ကျောင်းသားများ သက်ဆိုင်ရာကျောင်းများသို့ စုံစမ်းမေးမြန်းနိုင်ပါသည်။
- ၂ဝ၁၁ အောက်တိုဘာလတွင် MYOB စာမေးပွဲကို ကျင်းပပေးမည်ဖြစ်သောကြောင့် ဖြေဆိုမည့် ကျောင်းသူ၊ကျောင်းသားများ စာမေးပွဲကြေးများကို စက်တင်ဘာလ (၁) ရက်နေ့ မှ (၉) ရက်နေ့ အတွင်း ဗြိတိသျှကောင်စီ ပထမထပ်ရှိ စာမေးပွဲများဌာနတွင် မနက် (၈း၃ဝ) မှ (၁၂းဝဝ) နှင့် နေ့ခင်း (၁း၃ဝ) မှ (၃း၃ဝ) အတွင်း လာရောက်ပေးသွင်းနိုင်ပါသည်။
- ၂ဝ၁၁ စက်တင်ဘာလတွင် ACCA (CBE) စာမေးပွဲကို ကျင်းပပေးမည်ဖြစ်သောကြောင့် ဖြေဆိုမည့် ကျောင်းသူ၊ကျောင်းသားများ စာမေးပွဲကြေးများကို စက်တင်ဘာလ (၅) ရက်နေ့ မှ (၉) ရက်နေ့ အတွင်း ဗြိတိသျှကောင်စီ ပထမထပ်ရှိ စာမေးပွဲများဌာနတွင် မနက် (၈း၃ဝ) မှ (၁၂းဝဝ) နှင့် နေ့ခင်း (၁း၃ဝ) မှ (၃း၃ဝ) အတွင်း မှတ်ပုံတင်နှင့်တကွ လာရောက်ပေးသွင်းနိုင်ပါသည်။
- Starters, Movers, Flyers စာမေးပွဲများကို ၂ဝ၁၁ အေက်တိုဘာလ တွင် ကျင်းပမည်ဖြစ်သောကြောင့် စာမေးပွဲကြေးများ (Starters = USD 27, Movers = USD 31, Flyers = USD 34) ကို စက်တင်ဘာလ (၅) ရက်နေ့ မှ (၉) ရက်နေ့ အတွင်း ဗြိတိသျှကောင်စီ ပထမထပ်ရှိ စာမေးပွဲများဌာနတွင် မနက် (၈း၃ဝ) မှ (၁၂းဝဝ) နှင့် နေ့ခင်း (၁း၃ဝ) မှ (၃း၃ဝ) အတွင်း လာရောက်ပေးသွင်းနိုင်ပါသည်။
- ၂ဝ၁၁ ဒီဇင်ဘာလတွင် ABE (Association of Business Executives) စာမေးပွဲများကို ကျင်းပသွားမည် ဖြစ်သောကြောင့် စာမေးပွဲဖြေဆိုမည့် ကျောင်းသူ ၊ ကျောင်းသားများ စာမေးပွဲကြေးများကို စက်တင်ဘာလ (၁၉) ရက်နေ့ မှ (၂၂) ရက်နေ့ အတွင်း ဗြိတိသျှကောင်စီ ပထမထပ်ရှိ စာမေးပွဲများဌာနတွင် မနက် (၈း၃ဝ) မှ (၁၂းဝဝ) နှင့် နေ့ခင်း (၁း၃ဝ) မှ (၃း၃ဝ) အတွင်း လာရောက်ပေးသွင်းနိုင်ပါသည်။
- ၂ဝ၁၁ ဒီဇင်ဘာလတွင် ACCA (Paper-based exam) စာမေးပွဲများကို ကျင်းပပေးမည်ဖြစ်သောကြောင့် ဖြေဆိုမည့် ကျောင်းသူ၊ကျောင်းသားများ စက်တင်ဘာလ (၁၉) ရက်နေ့ မှ (၂၃) ရက်နေ့ အတွင်း ဗြိတိသျှကောင်စီ ပထမထပ်ရှိ စာမေးပွဲများဌာနတွင် မနက် (၈း၃ဝ) မှ (၁၂းဝဝ) နှင့် နေ့ခင်း (၁း၃ဝ) မှ (၃း၃ဝ) အတွင်း စာမေးပွဲကြေးများကို လာရောက်ပေးသွင်းနိုင်ပါသည်။
- ၂ဝ၁၂ ဇန်ဝါရီလတွင် GCE (IGCSE) Edexcel စာမေးပွဲများကို ကျင်းပသွားမည် ဖြစ်သောကြောင့် ဖြေဆိုမည့် ကျောင်းသူ ၊ ကျောင်းသားများ စက်တင်ဘာလ (၁၂) ရက်နေ့ မှ (၂ဝ) ရက်နေ့ အတွင်း ဗြိတိသျှကောင်စီ ပထမထပ်ရှိ စာမေးပွဲများဌာနတွင် မနက် (၈း၃ဝ) မှ (၁၂းဝဝ) နှင့် နေ့ခင်း (၁း၃ဝ) မှ (၃း၃ဝ) အတွင်း လာရောက်ပေးသွင်းနိုင်ပါသည်။
- ၂ဝ၁၁ ဒီဇင်ဘာလတွင် CGI စာမေးပွဲများကို ကျင်းပသွားမည် ဖြစ်သောကြောင့် ဖြေဆိုမည့် ကျောင်းသူ ၊ ကျောင်းသားများ စက်တင်ဘာလ (၂၆) ရက်နေ့ မှ (၃ဝ) ရက်နေ့ အတွင်း ဗြိတိသျှကောင်စီ ပထမထပ်ရှိ စာမေးပွဲများဌာနတွင် မနက် (၈း၃ဝ) မှ (၁၂းဝဝ) နှင့် နေ့ခင်း (၁း၃ဝ) မှ (၃း၃ဝ) အတွင်း လာရောက်ပေးသွင်းနိုင်ပါသည်။
Notice to candidates : Candidates/ visitors must bring NRC or driving licence or passport when coming to the British Council for security check.
Permalink Reply by Htet Htet Naung on September 14, 2011 at 11:48
july 29 ရက်က ဖြေထားတဲ့ myob စာမေးပွဲအောင်စာရင်းဘယ်တော့ထွက်မလဲဆိုတာသိချင်ပါတယ်ရှင်...
Permalink Reply by Ummay Ayman on September 15, 2011 at 9:24
၂ဝ၁၁ ဇူလိုင်လတွင် ဖြေဆိုထားသော MYOB Private Session စာမေးပွဲ အောင်လက်မှတ် (Certificates) များကို ဗြိတိသျှကောင်စီ ပထမထပ်ရှိ စာမေးပွဲများဌာနတွင် တနင်္လာနေ့ မှ သောကြာနေ့ မနက် (၈း၃ဝ) မှ (၁၂း၃ဝ) နှင့် နေ့ခင်း (၁း၃ဝ) မှ (၄း၃ဝ) အတွင်း စာမေးပွဲ အချိန်စာရင်း (သို့မဟုတ်) မှတ်ပုံတင်ကဒ်ပြားနှင့်တကွ လာရောက် ကြည့်ရှု နိုင်ပါသည်။
Permalink Reply by Htet Htet Naung on September 15, 2011 at 9:50
အခုလိုပြောပြပေးတဲ့အတွက် Ummay Ayman ကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်.......
Permalink Reply by pannei on September 15, 2011 at 17:23
To Dear !
I would like to know detail factors about of ACCA (Exam Information & User knowledge for candidates). I would like to study detail for ACCA.
Permalink Reply by Ummay Ayman on September 20, 2011 at 15:26
Kindly check the link. Thanks!
Permalink Reply by pannei on September 20, 2011 at 15:28
Thanks you very much Ummay Ayman.
Permalink Reply by Cho Thet Aye on September 19, 2011 at 17:17
Could you please tell me next FCE exam date and registration period ?
Permalink Reply by Ummay Ayman on September 20, 2011 at 15:28
Hi Cho Thet Aye,
The FCE registration period for the December 2011 Exam will be starting from3to 14 Oct, 2011. Thanks!
Permalink Reply by 2t3cejvvpeemz on September 25, 2011 at 14:31
15.9.2011 တွင် ဖြေဆိုထားသော MYOB Exam result ဘယ်အချိန်လောက်ထွက်မလဲ ဆိုတာကိုသိချင်ပါတယ်ရှင့်။ 2-လလောက်စောင့်ရတယ်ဆိုတာ ဟုတ်ပါသလားရှင်။ Result ထွက်ပြီးတော့ Certificate ကဘယ်လောက်ထိထပ်စောင့်ရလဲဆိုတာကို သိချင်ပါတယ်ရှင်။ ဖြစ်နိူင်ရင် အကြောင်းပြန်ပေးစေချင်ပါတယ်။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင့်။
Permalink Reply by Thinn Thwe Nu on October 4, 2011 at 10:26
စက်တင်ဘာလ ၁၅ ရက်နေ့က KMD မှာ MYOBဖြေဆိုထားတယ်ဆိုရင် Exam result တွေမရသေးပါဘူး။ Exam result တွေက သာမန်အားဖြင့် ၂လ လောက်ကြာတက်ပါတယ်။ Result နှင့်အတူ Certificate ပါရတာပါ။ Exam result တွေကို ကျောင်းမှာပဲ သွားရောက်ထုတ်ယူရမှာပါ။ နိုဝင်ဘာလကုန်ပိုင်းလောက်မှာ ကျောင်းကို ပြန်လည်စုံစမ်းပေးပါ။
Permalink Reply by 2t3cejvvpeemz on October 10, 2011 at 15:35
ယခုလိုဖြေကြားပေးတဲ့ Ma Thinn Thwe Nu ကိုကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ရှင်။